Mabasa Evaapostora 6:1-15
Varume vanomwe vanosarudzwa kuti vashumire (1-7)
Stefani anopomerwa mhosva yekumhura (8-15)
6 Mumazuva iwayo, vadzidzi pavakanga vachiwedzera, vaJudha vaitaura chiGiriki vakatanga kunyunyuta pamusoro pevaJudha vaitaura chiHebheru, nekuti chirikadzi dzavo dzakanga dzichidarikwa paigoverwa vanhu zvekudya zuva nezuva.+ 2 Saka vane Gumi Nevaviri vakashevedza vadzidzi vese vakavaunganidza, vakati: “Hazvina kunaka* kuti tisiye shoko raMwari tichiisira vanhu zvekudya patafura.+ 3 Saka hama, sarudzai pakati penyu varume vanomwe vane mukurumbira wakanaka,*+ vazere nemweya neuchenjeri,+ tovagadza kuti vaite basa iri rinofanira kuitwa;+ 4 isu nguva yedu yese nepfungwa dzedu zvichange zviri pakunyengetera nepaushumiri hweshoko.” 5 Zvavakataura zvakafadza vanhu vese, saka vakasarudza Stefani, murume akanga azere nekutenda nemweya mutsvene, pamwe naFiripi,+ Prokorasi, Nikanori, Timoni, Paminasi, naNikorasi, aibva kuAndiyoki uye akanga akambotendeukira kuchiJudha. 6 Vakauya navo kuvaapostora, avo vakanyengetera, vakaisa maoko avo pavari.+ 7 Izvi zvakaita kuti shoko raMwari rirambe richipararira,+ uye vadzidzi vakaramba vachiwedzera zvikuru+ muJerusarema; uye vapristi vakawanda vakatanga kuva vatendi.+ 8 Stefani akanga azere nenyasha dzaMwari nesimba, achiita zvishamiso nezviratidzo pakati pevanhu. 9 Asi vamwe varume verimwe rainzi Sinagogi reVakasununguka vakauya kuzoitisana nharo naStefani, vaine vamwe vekuKurini nevekuArekizandriya, nevamwe vekuKirikiya neEzhiya. 10 Asi vakatadza kumukunda pamusana peuchenjeri nemweya zvaiva paari paaitaura.+ 11 Vakabva vafurira vanhu pachivande kuti vataure kuti: “Takamunzwa achitaura zvekumhura Mozisi naMwari.” 12 Uye vakakusvudzira vanhu, nevakuru, nevanyori, vakabva vangomuunganira, ndokumubata nechisimba vakaenda naye kuSanihedrini. 13 Vakabva vauya nezvapupu zvenhema, zvikati: “Munhu uyu anongogara achitaura zvakaipa nezvenzvimbo ino tsvene uye Mutemo. 14 Semuenzaniso, takamunzwa achiti uyu Jesu wekuNazareta achaparadza nzvimbo ino ochinja tsika dzatakapiwa naMozisi.” 15 Vese vakanga vagere muSanihedrini vakaramba vakamutarisa, vakaona kuti chiso chake chakanga chakaita sechengirozi.
^ ChiGir., “Hazvitifadzi.”
^ Kana kuti “vanopupurirwa zvakanaka.”